#Annoyomics kaRisto Mejide noma Ngabe iParis Hilton noJose Sánchez Gordillo bafana ngani? | Izincwadi Zamanje
UDani Lanza | | eziningana
Ngenxa yesikhathi sakhe ku-OT nakwezinye izinhlelo, uRisto Mejide usephenduke umlingiswa ongumkhiqizo uqobo, onezici ezingasoze zalibaleka, okufana nomkhiqizo ohlale uqoshwe ekhanda lakhe. Noma uma kungenjalo, buza omunye wabaqhudeli ukuthi ngubani oyisisulu sokunye kwabo okugxekayo.
Futhi #Annoyomics imayelana nendlela yakhe. Incwadi ethakazelisa kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni, futhi ngenxa yendaba engathandeki njengokuzivocavoca.
Ukhathazeka ngokuthi bazothini. Uthandana nokungafaneleki. Awuthandi ukuba nezitha. Kubiza ukuthi cha. Uyesaba ukuheha ukunakwa. Futhi awukwazi ukumela ukuthi abantu bayakuzonda noma bakhulume kabi ngawe.
Futhi ngeke kwenzeke.
Futhi lokho, empeleni, kungenye yezinkinga zakho.
Okunye ukuthi uyayidinga le ncwadi.
UJose Mourinho uthukuthele, uRyanair uthukuthele, uMichael Moore uphatheke kabi, uLady Gaga uthukuthele, uJulian Assange uthukuthele, uBenetton uthukuthele, uJohn Galliano uthukuthele, uSalman Rushdie uthukuthele. Kodwa wukuthi neRenault Mégane, ngosuku lwayo, nayo ibikhathaza. Futhi uMadonna neBMW neApple ngisho noJesu Kristu.
Bonke bake bacasula ngasikhathi sinye noma kwesinye isikhathi, kepha nokho yilowo nalowo ngendlela yakhe uphumelele. Noma baphumelela ngokunembile ngoba babecasula? Ingabe konke bekuyingxenye yecebo? Ungaphumelela ngokuhlupha? Kunalokho, ungaphumelela NGAPHANDLE kokukhathazeka? Kubiza malini ukuzihlupha? Ngabe kuhlala kushibhile ukuzama ukujabulisa wonke umuntu futhi "uphume ezinkingeni"? Ngabe angakhiwa amasu okuhlupha? Ingabe kukhona umnotho wokuhlupheka? Futhi njengabathengi, siyathanda ukuphazamiseka? Ngabe sizimisele ukuyikhokhela? Ngiyaxolisa ngesiphazamiso?
URisto Mejide, intatheli, umkhiqizi, ubuntu bethelevishini obucasulayo nombhali we- «Negative thought» -enye yezincwadi eziyi-10 ezithengisa kakhulu ezingezona eziqanjiwe zango-2008-, «Negative feeling» (2009) kanye no- “Kwangathi ukufa kungahamba nawe” (2011) , isinikeza ku- # ANOYOMICS ukuhlaziywa okungajwayelekile nokwesabekayo kwezindaba zempumelelo ezicasulayo kanye nencwajana esebenzisekayo yokusebenzisa ngokunenzuzo ukungajwayelekile kwethu, imiphetho namaphutha athikameza abanye ukuthi bawenze umthombo wethu oyinhloko wemali engenayo.
Le yi-ode yokuhlupha okuhleliwe kokwenza imali, isimemo esisemthethweni sokwengeza inani lezitha zakho ngenhloso yokuthi zikusekele. Futhi ngaphezu kwakho konke, uhambo lwethikithi lendlela eyodwa. Ngoba uma sekuqalisiwe, awusoze uphinde ubone umhlaba ngendlela efanayo.
Noma ngubani ofunde noma iyiphi yezincwadi zakhe zangaphambilini uyazi ukuthi le yehlukile. Umsebenzi uphakamisa izinyathelo ezithile zokucasula, uhlelo olusebenzele umbhali kuwo wonke umsebenzi wakhe, ngokuncike kakhulu kusu alichaza igxathu negxathu. I-eseyi esebenziseka kakhulu ekukhangiseni nasekwenzeni uphawu lomkhiqizo.
Kuhloswe ngabo bonke abafuna ukubeka uphawu lomkhiqizo wabo, lo msebenzi futhi usinikeza nohambo lokuya kuwo wonke lawo macala ezinkampani nabantu abadumile abasebenzise le nkinga ukuba baphumelele. Kepha hhayi impumelelo yemali, ngoba isicefe singenziwa yinkampani kanye nenhlangano engenzi nzuzo.
Mayelana nezikhundla zomphakathi kanye nomhlaba wodumo, umlandeli wezindaba ubalula abanye babalingiswa abaphikisanayo, abaphikisi bezindaba eziyinqaba nezindaba.Ingabe uParis Hilton noJuan Manuel Sánchez Gordillo bafana ngani?
Kepha uphinde achaze ukuqala kwendaba kaRisto Mejide ngohlobo lwedayari noma ukufingqa okwenzekile selokhu wabizelwa ukuba yijaji kwi-gala yokuqala ye-OT abamba iqhaza kuyo. Ngoba masingakhohlwa ukuthi iRisto nayo inezinsiza zokulandisa, iprozi ebamba izingwegwe ikakhulu ngenxa yamazwana akhe ahlabayo nangamahlaya, lapho okubhekwa khona okuningi akwenzayo usuku nosuku kwethulwa, ngama-anecdotes awenzeka kuye njengomlingiswa wakhe "inoveli" yakhe
Njengesiphetho kufanele sigcizelele ukuthi umdlalo, ngaphezu kokuba yindatshana enomsoco, uyajabulisa. Akuyona incwadi yokuzisiza, kunalokho kuphambene, ngoba uma ukucasuka kungenziwa kahle, singalimaza izimpilo zethu kancane. Omunye umkhiqizo ovela kumkhiqizo wohlobo lweRisto Mejide, obuye ulungele bonke labo abake bahlala phansi balinde ukuvela kwalokhu komunye wama-OT galas ngaphandle kokuba nentshisekelo kulokho ababengenele umncintiswano.
Risto Mejide Roldan (Barcelona, Isi-Catalonia, España, 29 ngoNovemba de 1974), ungumqondisi ukudala ukukhangisa, umhlanganyeli ithelevishini y umlobi español, yize aziwa kakhulu ngokubamba iqhaza kwakhe njengejaji emaqenjini wethelevishini I-Operación Triunfo y Uyakufanelekela.
Unelayisense futhi MBA kwezokuphathwa kwebhizinisi ngu ESADE, isigaba sika-1997, iBarcelona, ​​lapho ayephethe ubuhlakani obudala besifundo somnotho esisha iminyaka engu-8. Njengamanje ufundisa ePostgraduate Programme in Communication and Advertising e-ELISAVA School of Design enamathele ku- IPompeu Fabra University (UPF), lapho ibeka khona isihloko soBuciko.
Ngaphandle kokuthi #Aynoyomics, Risto Mejide ishicilelwe Ukucabanga okungalungile (2008), Umuzwa ongemuhle (2009) futhi Kwangathi ukufa kungaba nawe (2011).
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » #Annoyomics kaRisto Mejide noma Ngabe uParis Hilton noJuan Manuel Sánchez Gordillo bafana ngani?
Ukubaluleka kwabalingiswa ...